သာလွန်ဇောင်းထက်| January 24, 2013 | Hits:14,377
မြန်မာပြည်သား January 24, 2013 - 5:27 pm ဧရာဝတီ အလွန် မှန်ပါသည်။ ကို သာလွန် ဇောင်းထက် ကိုလည်း အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရှမ်းပြည်တွင် ဦးပိုင်နာမည် ခံကာ မွေးစားသားကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အကုန် ပေးပြီးပတ္တမြားများ ထုတ်ယူသွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ၊ သားသမက်များ ချမ်းသာအောင် နေပြည်တော် ပရောဂျက်ကြီး တွင် မတန်တဆ ဈေးများဖြင့် ငွေပေးချေပေးခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၊ မြင်းခြံ တွင် စက်ရုံများကို တန်ကြေးထက် ၄ ဆ ခန့်ပိုပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးကို အရေး မယူ မနိုင်မခြင်း တိုင်းပြည်တွင် ခိုးသား ဝှက်သားများ ပေါများ နေအုံးမည် ဟု တင်ပြ ပါရစေ။ ပင်လယ်ပြင်တွင် တရားမဝင် လုပ်ရင်းကြီးပွားနေသူ တစ်ဦးက ကမ္ဘာအေးဗီလာတွင် တည်ဆောက်ပေးသော အိမ်ကို ယူမိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး လည်း ထိုယူထားသော အိမ်ကို တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်အပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
ReplyaJanuary 24, 2013 - 6:47 pm မတရားလုပ်ထားသူတွေအားလုံးကိုအရေးယူမယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး၊(အားလုံးကုန်သွားမှာပေါ့)ဒိလိုပဲတစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စထိုးကျွေးပြီးမြို့မေတ္တာခံဖို့ကြိုးစားနေမှာပါ။လက်ရှိအစိုးရကိုကြိုးကိုင်နေတဲ့သူကိုမတရားလုပ်ထားတဲ့သူအားလုံးကကာကွယ်ထားကြမှာပါ။သူပြိုသွားခဲ့ရင်မတရားမှုမျိုးစုံလုပ်ထားကြတဲ့အကြီး၊အသေး၊အလတ်အားလုံးထောင်ထဲရောက်ကုန်မှာပေါ့။
Reply angel January 24, 2013 - 7:06 pm ဒီလိုနဲ့ဘဲပြီးသွားမှာပါ။ for showလေးတွေလုပ်ပြပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို
Reply ဌေးဝင်း January 24, 2013 - 8:10 pm ဇန်န၀ါ၇ီလ..၂၄၇က်..ယနေမှစပြီး..သမတဦးသိန်းစိန်အား…အနားပေးလိုက်သည်။
Reply ဗမာ January 24, 2013 - 9:18 pm ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆာင်ကြီးများအား…..အလေးပြု…(ပြီးတော့)….နေမြဲ…ခိုးမြဲ…၀ှက်မြဲ…ကလိမ်ကျမြဲ…ဘိုကျမြဲ…ယုတ်မာမြဲ…အနိုင်ကျင့်မြဲ….xxxမြဲ….xxxမြဲ…. ….. ….. ….etc;
Reply Myo Nyunt January 24, 2013 - 11:43 pm လုပ်ရင်လည်း ပွင့်လင်း ထင်သာမူ ရှိမှကောင်းမှာ မဟုတ်ရင်
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 25, 2013 - 3:47 am အတွင်းကျကျ စေ့စပ်စွာ လေ့လာရေးသားပေးသော ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်ကို အလွန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သတင်း မီဒီယာတွေ ပွင့်လင်းစမို့ အမျိုးမျိုးသော၊ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်အပြည့်နဲ့ သတင်းတွေ အကြားမှာ သည်လို သတင်းမျိုး ရှားပါးစွာ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေနပ်မိသလို ကျန် သတင်းထောက်များလဲ သတင်းထူး၊ သတင်းဦး ဖြစ်ရင် ပြီးရော အမြန်ရေးတင်တာထက် အခုလို ပြည့်စုံစွာ ရေးနိုင်ကြပါစေ။ (အချို့သတင်းများမှာ အပေါ်က မောင်ဘ၊ နောက်တကြောင်းမှာ မောင်က ဖြစ်သွားတာတွေ၊ အရှေ့နဲ့ အနောက် အလွဲလွဲ အချော်ချော်တွေ၊ တနေရာက ကြားတာကို အတည်မပြုပဲ ရေးတာတွေ တွေ့ရလို့ပါ။)
Reply Lailun January 25, 2013 - 7:14 am Why did Thein Sein ask them to resign? What really was behind their resignation? Why doesn’t Thein Sein let them face the law and the court while serving as ministers? Is Thein Sein still trying to cover up these corrupt high ranking officers?
Reply Ko Ko January 25, 2013 - 12:29 pm သနားစရာကောင်းတဲ့ ဦးသိန်းထွန်းပါ တကား။
Reply မြန်မာပြည်သား January 25, 2013 - 2:06 pm ဖြစ်နိုင်ရင် ပဆင တို့ ဆမ တို့ ဆသရ တို့ ဆိုတဲ့ ဌာန တွေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်သူ လူထု ကြိုက်တဲ့ သန့်ရှင်း အစိုးရ ဆိုတာ ထူထောင်ပါလားဗျာ။
Reply ko January 28, 2013 - 3:10 am please check over seas communication.
Reply Goat Kyar January 25, 2013 - 5:18 pm ဒီ့အရင်စားသွား၊ဝါးသွား သူများကိုကောဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဗျာ။
Reply maung soe January 25, 2013 - 5:49 pm မြန်မာနိုင်ငံ၏ online system ကို china က ထိမ်းချုပ် ထားနိုင်ပြီ။နိုင်ငံထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ေ၇းများလုံခြုံေ၇းစိုး၇ိမ်၇သည်။
Reply R.zar January 26, 2013 - 3:17 pm ဘယ်နိုင်ငံ က ထိန်းထိန်း သူတို့ အတွက် (ကိုယ်ကျိုး) အကျိုးရှိရင်တော့ ဒီစစ်သား ဘောင်းဘီချွတ်တွေ လုပ်နေအုံးမှာပဲ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကျသွားတဲ့ နေ့ မှ တိုင်းပြည် ချမ်းသာမယ်မှတ်ပါ။
Reply win January 26, 2013 - 10:26 pm right
Reply Ko Khine January 26, 2013 - 10:20 pm ယခုစုံစမ်းနေတာက ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စုတွေဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလေလုံးအပုတ်မခံနိုင်းဘူးထင်တယ်။
Reply Wut Yee January 30, 2013 - 5:06 pm ယခုစုံစမ်းနေတာက ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စုတွေဘဲ ဖြစ်နေတယ်